"Ary hoy Izaho (Jesosy) aminareo: Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondòny, dia hovohana ianareo." Lioka 11:9
- “Inona àry no hataoko ho anao?” hoy i Elisa mpaminany fahiny tamina vehivavy mananotena iray (2 Mpanjaka 4:2). Io vehivavy io dia nanan-trosa, nefa tsy nanana fidiram-bola mihitsy. Hoy i Elisa nanampy: “Lazao amiko : Inona avy no anananao ao an-trano?” Niteny ho azy ny valiny: “Ny ankizivavinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja”. Diloilo be dia be no nentin’i Elisa namaly izay nilain’ity tokantrano ity. Voaloa ny trosa, nanan-kohanina ilay ankohonana.
- “Fa inona àry no hatao ho anao?” hoy i Elisa taoriana kelin’izany, tamina vehivavy iray, izay nanankarena kosa (2 Mpanjaka 4:14). Nazava ny valinten’ny zatovolahin’i Elisa : “Tsy hitanao va fa tsy manan-janaka izy?” Niantso an-dravehivavy ilay mpaminany ka nampanantena azy hoe : “Hitrotro zazalahy ianao”. Dia tanteraka ny teny fampanantenana.
- “Inona no tianao hataoko aminao?” hoy Jesosy tamin’i Bartimeo jamba. Teo no ho eo ihany ny valiny: “Rabôny ô, ny mba hampahiratina ny masoko” (Marka 10:51, 52). Ny fahajamban’i Bartimeo indrindra no nahatonga azy hanatona an’i Jesosy. Tamin’ny teny indraim-bava no nampahiratan’i Jesosy ny masony, ary fomba mahagaga no namaliany ny finoany tamin’izany.
Ireo ohatra ireo dia mampirisika antsika hiresaka amin’Andriamanitra am-pahatsorana, tsy ilàna teny maro. Aoka tsy hihevitra hoe tsy maintsy mampiasa fombafombam-piteny, rehefa hanambara amin’Andriamanitra ny manjo antsika na ny manjo ny hafa. Aoka hahay hitsotra aminy hoe: “Izao no mahazo anay. Mila ny fanampianao izahay”. Ho sahaza mandrakariva ny valiny homeny.
Isika tsirairay no ametrahan’Andriamanitra fanontaniana ankehitriny hoe: “Inona àry no hataoko ho anao?” Anao sy Andriamanitra izany.